Accueil > Gazetin'ny nosy > Iza no ho filoha ? : Ravalomanana Marc sa Andry Nirina Rajoelina ?
Iza no ho filoha ? : Ravalomanana Marc sa Andry Nirina Rajoelina ?
Raha ny vokatra azo vonjy maika hatramin’izao dia ingahy Marc Ravalomanana sy Andry Nirina Rajoelina no mitarika hatramin’izao fotoana izao.
Mizara roa tanteraka ny voka-pifidianana ka ingahy Ravalomanana Marc no azo lazaina fa mitarika amin’ny toerana maro eto Antananarivo renivohitra na Analamanga. Ny mpifidy an’ingahy Rajoelina indray dia ireo amin’ny toerana ambany tanàna hoy ny fitenenana mahazatra, ary tsy vitsy koa.
Raha ny fahazoana fandresena amin’ny fihodinana voalohany izy roalahy ireo raha ny tombantombana hatrany. Raha toa ka lehibe ny elanelana eto amin’ny faritra Analamanga, na koa ato amin’ny faritanin’Antananarivo vao azo lazaina fa hisy ny fandresena amin’ny fihodinanana voalohany na « 1er tour de vita ».
Sarotra ny maminavina ny vokatra ho azon’izy roalahy ireto. Ny hany azo aroso ho antsika mpamaky ny gazety dia ny zava-misy amin’ny antotan’isa. Ny mpifidy voasoratra anarana ao amin’ny faritra Analamanga dia mitovy isa amin’ny mpifidy any amin’ny faritan’Antsiranana sy Fianarantsoa mitambatra. Ny faritanin’Antananarivo indray dia mifanahantsahana amin’ny isan’ny mpifidy ao amin’ny faritany telo dia Fianarantsoa, Antsiranana ary Toamasina.
Noho ireo antony voalaza ireo dia manana ny toerany manokana amin’ny fifidianana eto Madagasikara ny vokatra azo ato amin’ny faritra Analamanga sy faritan’Antananarivo.
Ny vokatra azo eto Antananarivo dia azo aminavinana ny vokatra amin’ny ankapobeny mety ho azon’ny kandidà manerana an’i Madagasikara.
Hatramin’izao dia ingahy Ravalomanana Marc sy Andry Nirina Rajoelina no mitarika eo Antananarivo. Hita fa misy elanelany maro no misy amin’izy roalahy ireo sy ny kandidà hafa rehetra. Noho izany dia azo lazaina fa ny iray amin’izy roalahy ireto no ho lasa filoham-pirenena faha roa amin’izao repoblika fahefatra izao.
Raha ny tantaram-pirenena no asian-teny dia azo lazaina fa fampisehoan-kerim-pôlitika no hitranga amin’izy roalahy ireto. Nifanongana izy ireo ny taona 2008-2009. Ingahy Andry Nirina Rajoelina tamin’izany fotoana izany dia Ben’ny tanàna teto Antananarivo renivohitra. Ingahy Ravalomanana Marc indray no filoham-pirenena tamin’izany fotoana izany. Maro no antony nahatonga ny fifanonganan’izy roalahy ireo. Tafiditra hatrany amin’ny resaka fianakaviana aza ny raharaha fantatra hatramin’izao.
Nifanongana izy roalahy ireto ka nahatonga ny fanjakana tetezamita tamin’ny 2009-2013 izay mahabe resaka hatramin’izao.
Mbola manana ny olona mpomba azy roalahy ireto ny andaniny sy ny ankilany ka izao hita taratra amin’ity fifidianana ity izany hatramin’izao. Niady sy nifampihantsy ireo tao anatin’ny taona maro, ka izao niditra amin’ny sehatra ara-dalàna izao indray amin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena izao.
Hanao ahoana ny ho fandehan’ny vokatra amin’ny fihodinana faharoa ity? Ny azo lazaina dia tsy maintsy misy ny fifanohanana hataon’ireo vondrona na antoko na koa ny kandidà izay tsy lany tamin’ity fifidianana ity amin’ny andaniny sy ny ankilany. Hanao ahoana indray ny hery pôlitika amin’izany ary iza no ho mpandresy amin’izy roalahy ireo?
Manomboka izao izany dia dingana vaovao indray no hiseho eto amin’ny firenena ka hohitantsika ny tohiny.